एक औद्योगिक शैली कोठा को सजावट कसरी सजाउनुहोस्
एक औद्योगिक शैली कोठा कोठा सजावट गर्न कुञ्जीहरू
मारिया vazquez | | भोजन कोठा, सजावट, शैलीहरू
ठुलो लाक्ड धातु बत्तीहरू, जस्ती इस्पात कुर्सीहरू, कडा काठको टेबुल ... यी तत्वहरू हुन् जुन हामीलाई सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ औद्योगिक शैली कोठा कोठा। खाली ठाउँहरू जसमा विभिन्न स्टाइलका फर्निचरहरू संयुक्त हुन्छन् र जसमा हरेक विवरण केन्द्र केन्द्र लिन्छ।
औद्योगिक शैलीले वर्षौंदेखि हामीलाई आकर्षित गरिरहेछ। हामीले सानो परिचय गराउन हिम्मत गरेका छौं फर्निचर र सामान भान्साकोठामा औद्योगिक, बैठक कोठा ... किन एक कदम अगाडि जानु हुँदैन र यो शैलीको साथ सम्पूर्ण ठाउँ सजाउने? के तपाईं भोजन कोठाको साथ हिम्मत गर्नुहुन्छ? हामी कसरी भन्छौं।
भोजन कोठाको लागि ठाउँ आफैमा ठूलो महत्त्वको हुन्छ। पर्खाल संग कोठा खुला ईंट वा ठोस फर्शहरू, चाहिएको औद्योगिक शैली कोठा कोठा सिर्जना गर्न हामीलाई उत्तम आधार प्रदान गर्दछ। उत्तम, तर आवश्यक छैन; यसलाई चाहिने चरित्र दिन अझ धेरै तरिकाहरू छन्।
कुनै भोजन कक्षको मुख्य टुक्रा टेबल हो। तपाईं कहिल्यै बलियो काठले बनेकोमा गलत बेटि। गर्नुहुन्न. काठ र / वा धातु खुट्टाहरू वा कुँदे खुट्टाको साथ पुरानो शैलीको साथ सरल लाइनहरू; त्यो छनौट गर्नुहोस् काठ टेबल अरू के तपाईंको ध्यान आकर्षित गर्दछ।
टेबल वरिपरि, ठाउँ इस्पात कुर्सि चमकको साथ म्याट वा विभिन्न र in्गमा lacquered ... टोलिक्स कुर्सि तिनीहरू एक प्रस्तावना हुन् सधैं ध्यानमा जब यो औद्योगिक शैली कोठा कोठा सजावट को कुरा आउँछ। तपाईं काठ वा आधुनिक डिजाइन कुर्सीहरूमा पनि शर्त लगाउन सक्नुहुन्छ, यदि तपाईं चिह्नित औद्योगिक शैलीबाट भाग्न चाहनुहुन्छ भने।
भोजन कोठाको सजावटको एक अत्यावश्यक तत्व बत्तीहरू हुनेछन्, जुन टेबलमा झुण्डिने छन्। एक, दुई, र तीन पनि ठूला बत्तीहरू तालिकामा पigned्क्तिबद्धले तपाईंलाई इच्छित प्रभाव प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सेतो, कालो, इस्पात, तामा वा गाढा हरियो सब भन्दा साधारण रंगहरू हुन्।
के तपाईं अब औद्योगिक भोजन कोठाको आवश्यक तत्त्वहरू के बारे अधिक स्पष्ट हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » स्पेसहरू » भोजन कोठा » एक औद्योगिक शैली कोठा कोठा सजावट गर्न कुञ्जीहरू
पुनर्चक्रित फलकहरूसँग सजाउनुहोस्
तपाईंको घरको लागि दराजको विन्टेज छाती